“Jurgen Klopp wuxuu mudan yahay in bannaanka Anfield loogaga dhiso taallo” – Steven Gerrad – Gool FM
“Jurgen Klopp wuxuu mudan yahay in bannaanka Anfield loogaga dhiso taallo” – Steven Gerrad
Haaruun June 16, 2020
(Liverpool) 16 Juun 2020. Halyeyga Liverpool ee Steven Gerrard ayaa aaminsan in Jurgen Klopp uu u qalmo in taallo looga dhiso bannaanka garoonka kooxda ay ku ciyaarto ee Anfield Stadium marka uu kooxda u soo gacan galiyo horyaalka ay sugayeen mudadda soddonka sano.
Reds ayaa qarka u saaran inay gacanta ku dhigaan markii ugu horreysay Premier League inay sare u qaadaan iyagoo 25 dhibcood ka sarreeya kooxda ku soo xigta ee Manchester City xilli horyaalka dib u ciyaaristiisa dib loo billaabayo maalinta Arbacada.
Kabtankii hore ee Liverpool ayaa Klopp ku tilmaamay macallinka ugu wanaagsan xilligan, waxaana uu u soo jeediyay maamulka kooxda reer England inaysan ka daahin inay u sameeyaan maamuus ay macallinka Jarmalka ah ku ag dhigayaan halyeeyada kooxdan laga xuso ee Bill Shankly, Bob Paisley iyo Sir Kenny Dalglish.
“Qof sida Jurgen Klopp oo kala ah waa in la abaalmariyaa isla xilligan. Marka kubadda cagta la joogto, qofka guulihiisa lama soo bandhigo illaa ay muddo badan ka soo wareegto” ayuu yiri Gerrard.
Waxaana uu intaas uu ku daray inaysan Liverpool aqbalayn inay sidaas oo kale dhacdo, waajibna ay ku tahay inay maamuusaan Klopp.
Laacibkii hore ee qaranka Ingiriiska ayaa sidoo kale Klopp ku ammaanay sida uu ugu dhiirraday in Reds uu qabto xilli adag, isla markaasna uu soo gaarsiiyo maqaamka ay hadda joogto.
"Waxaan nasiib u lahaa inaan ka hor tagin Lionel Messi" - Halyey Real Madrid u soo ciyaaray
Halkee ayuu marayaa wada xaajoodka heshiis kordhinta ee Barcelona iyo Marc-Andre Ter Stegen?